Sidee loo barto luqad cusub? | DM words
Sidee loo barto luqad cusub?
Dadku waxay si isdaba joog ah ula kulmaan caqabado dhinac kasta oo nolosha ah, barashada luqad cusub waa mid nooc ah. Waxay kuxirantahay duruufaha, qeexida qaababka saxda ah ee lagu barto luqad cusub ayaa aad uga dhib badan taa maxaa yeelay dhamaan shuruudaha iyo tilmaamtu kuma haboona qof walba. Tani waa sababta ugu weyn ee igu riixday inaan helo xal ku habboon dhammaan soogalootiga daneynaya inay wax bartaan oo ay la kulmaan caqabado cusub.
Koorsooyinka luuqaduhu waa habka ugu badan ee ay adeegsadaan soogalootiga si ay u bilaabaan una raacaan nidaamka isdhexgalka dalkooda ay martida u yihiin. Hadana kooxdan dadka ah inta badan kuma guuleystaan ​​sababo kala duwan awgood iyadoo kuxiran asalkooda. Marka, si aan fikrad cad uga helo arrintan waxaan tilmaami doonaa faa'iidooyinka iyo daciifnimada qaadashada koorsooyinka luuqadda.
Koorsooyinku waxay dhiirrigeliyaan ardayda maxaa yeelay waxay u maleynayaan inay tahay meesha saxda ah ee lagu barto luqad cusub
Barnaamijka koorsooyinka luqadda waa la qaabeeyey oo nuxurkiisu aad ayuu faa'iido u leeyahay
Qiimeynta iyo helitaanka shahaadada luuqada waxay si weyn u dhiiri gelin kartaa una awaal marin kartaa ardayda
Kaqeybgalka kooxo waaweyn oo ay weheliyaan in kabadan 10 arday oo da 'kala duwan ah iyo asal waxbarasheed ayaa noqon kara mid aan faa'iido lahayn
Muddada koorsooyinka luqadda (hal sano ama ka badan) si loo helo shahaadada waxay ku abuuri kartaa arday badan jahwareer sidaa darteed waxay u muuqdaan inay luminayaan diiradda saaraan
Manhajyada iyo dukumiintiyada xirfadeed ee raacaya qawaaniinta naxwaha kuma lahan saameyn togan maxaa yeelay soo galootiga badankood waxay xiiseeyaan inay bartaan luqadda loo isticmaalo nolol maalmeedkooda
Markaad dhex marto dhaliishaas iyo talooyinka waa inaad fahanto ujeedadaydu waxay tahay inaan u helo xalka saxda ah kuwa isku dayaya inay helaan wadada saxda ah ee barashada luqad cusub. Ma doonayo inaan ka dhaadhiciyo qofna inuu raaco ama ka baxo koorsooyinka luuqadda laakiin sidaan horay u soo sheegay, waxaa jira faa'iidooyin iyo daciifnimo marka waa inaan tixgelin siinno baahida soogalootiga, caqabadaha ay la kulmaan, taariikhdooda iwm.
Barashada luuqada shaqada waxay muujisay natiijooyin wanaagsan maxaa yeelay dadku aad ayey iskood isugu xaliyaan. Habkani wuxuu saameyn togan ku leeyahay bulshada inteeda badanna waxay soo bartaan luuqada lagu hadlo oo runti loo isticmaalo nolol maalmeedka. Aniga oo ka faa'iideysanaya kiiskan, waxaan ku xusi lahaa dhaqanka afka ah ee dadka waddanka u dhashay iyo daciifnimo marka soogalootiga ay la shaqeeyaan dadka ku hadlaya kaliya luuqadooda.
Bulshadu door wanaagsan ayey ka ciyaari kartaa oo waxay ka tarjumi kartaa saameyn togan haddii lagu daro kala duwanaanta ku hadalka luqadda ay dadku ku nool yihiin Badanaa kooxaha bulshada waxay ku hadlaan luuqadooda ama Ingriisiga oo ah luuqad guud taas oo runtii saameyn ku yeelata muddo dheer laqabsashada xal u helida baahidooda. Kuhadalka sedex luuqadood nolol maalmeedka waxay noqon laheyd mid faa iido badan maadama ay kaa dhigeyso inaad dareento waxyaabo kuu gaar ah arimaha dhaqanka marka loo eego, luqada aad ku nooshahay oo waxtar u leh baahiyaha maalinlaha ah iyo dabcan Ingiriisiga ayaa macno u leh ku sii socoshada ilbaxnimada casriga ah.
Barashada luuqada guriga waxay noqon kartaa mid faa iido leh hadii qof walba isku dayo inuu ku hadlo. Hase yeeshe si loogu guuleysto, qoysaska soogalootiga ah waa inay isku dayaan inay ku dhaqmaan luqadda iyagoon ilaawin kooda. Habka ugu fiican ee kiiskan waa in la raaco carruurta oo ay ku koraan jawi ka duwan iskuullada, asxaabta cusub iwm.
Barashada luuqada iyadoo la adeegsanayo warbaahinta waxay la imaaneysaa saameyn aad u wanaagsan fursadahana way u furan yihiin qof walba. Xaqiiqooyinka la taaban karo ayaa muujiyay guul weyn arimahan, oo ay ku jiraan barashada luqadda ee telefishanka, raadiyaha, saxaafadda, iyo gaar ahaan internetka. Internetku wuxuu noqon doonaa kiis gaar ah maadaama fursadaha ka jira webka oo dhan la bixiyo qalabkuna noocyadiisa oo dhan yahay. Kumbuyuutarkaaga, waxaad u adeegsaneysaa ereyo badan maalin kasta oo haddii aad si qoto dheer diiradda u saareyso luqadda markaa awoodda inaad dhaqso wax ku barato way furan tahay.
Iyadoo aan loo eegin habka aad isticmaali doonto, mid kastaa wuxuu leeyahay saameyn togan oo u gaar ah. Waxaan u siinayaa hababkan si aan ugu dhiirigaliyo soo galootiga inay adeegsadaan habka ugu haboon iyaga maxaa yeelay sidaan ku sheegay bilowgii, waxay kuxirantahay sida dadku u fahmaan luqad ku saleysan taariikhdooda waxbarasho. Talo ahaan waxay noqon laheyd hab wanaagsan oo aad iskudaydo inyar oo kamid ah kadibna aad isbarbar dhigto oo aad dooratid midka kugu haboon adiga. Xaaladaha marka aad qaladaad samayso intaad hadlayso, wax badan kama fekerin taas laakiin sii wad inaad hagaajiso xirfadahaaga oo tallaabo tallaabo u barashada ayaa kuu fududaanaysa oo horumar baad ka samaynaysaa.
Talo ahaan, aniga oo tixgelinaya waaya-aragnimadayda safarkii dheer ee aan ku soo maray caqabado kala duwan, hab kastoo aad isticmaasho, xusuusnow inaad ku celceliso ereyada iyo weedhaha inta jeer ee aad kari karto, xitaa haddii aad si fiican u taqaanid ama aad si fudud u xasuusato. Sameynta jimicsi luqadeed iyo ku celcelin isku mid ah waxay kaa caawin doonaan inaad horumariso xirfadahaaga luqadeed.
Aasaasaha ereyada DM